E-Journal: Globalization and My Village!
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက အိမ်လွမ်းသူ(မှန်နီကုန်း) at 8:36 PM
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကတော့ ဒီလိုပဲဗျ။ သူ့နေရာနဲ့သူ ရပ်တည်နေတာ။
ဒါနဲ့ စကားမစပ်၊ မိန်းမခိုးတာ မိရင်လည်း ဒီလိုကြီးပဲလားဟင်။
စာရှုသူမဇနိကတော့ ပြာလူးတို့ရွာက hacker တွေကို စပ်စုချင်လို့ အလည်လာအုံးမယ်ဗျို့။
အစ်ကိုရေ ဃဃဏဏ ဆိုတာက “ ဂဃနဏ” လို့ထင်ပါတယ် ။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ ။
လာရောက် ဖတ်ရှု့ကြသော မိတ်ဆွေ အပေါင်းကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..။
အမှားလေးတွေ ကိုပြုပြင်ပေးသော ကိုရင်ညိမ်းကိုလဲ အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏..။
နောက်လဲ ပြုပြင်ပေးပါအုံးဗျာ..။တကယ်ကို မသိတာပါ..။ နောက်ပြီး ကျနော် ဒီပိုစ့်(တ်)ကို
IT ဆိုင်ရာ စကားလုံးတွေ ကူရှာပေးရင်း အစစအရာရာ အကူအညီပေးသော ကိုတာမြစ်ထားသောကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုအိမ်လွမ်းသူရေ . . . ဖိတ်ထားသော်လည်း ခုမှပဲ ပြာလူးတို့ရွာဘက်ရောက်တော့တယ်။ ကျနော်နဲ့ နာမည်က ကာရံတူနေတော့လည်း မှတ်မှတ်ထင်ထင်ရှိသားပေါ့ဗျာ။ အိုင်တီတွေ အသာထားဗျာ ။ ကာလသားခေါင်း က ဘယ်သူတုံးဗျ။ ရွာက ကွမ်းထောင်ကိုင်လေးကို ပိုးချင် ပန်းချင်လွန်းလို့ ကူညီပါဦးဗျာ။ တရွာသားပေမယ့် မလွမ်းစေရအောင် ရွာမှာ လိုက်နေပေးပါ့မယ် ။ :D
YGN မှာတုန်းက ခဏ တွေ့လိုက်တယ်။ Ball ပွဲတွေကြည့်ရင်း။ အပြင်မှာလိုပဲ စာရေးရာမှာ ပွင့်လင်းတယ်။ အခုလိုပဲ များများရေးနိုင်ပါစေ။